I-Acid Hydrolysis Indlela ye-acid hydrolysis yahlulwe yanyathelo elinye kunye nendlela eneenyathelo ezimbini. Eyona nkqubo iphambili yokuhamba kwamanyathelo amabini okulungiselela i-gallic acid ekrwada → ukufunyanwa kwamanzi ashushu
I-Tannic acid luhlobo oluthile lwe-tannin, uhlobo lwe-polyphenol. I-asidi yayo ebuthathaka (pKa ejikeleze i-6) kungenxa yamaqela eephenol kulwakhiwo. Ifomula yemichiza ye-tannic acid edlalwa rhoqo inikwa njenge-C76H52O46, ehambelana ne-decagalloyl glucose, ...
Umxholo weMbali yeGallic Acid kunye nokuSetyenziswa
IGallic acid yinto ebalulekileyo ye-inki yentsimbi, ukubhala okusemgangathweni kwaseYurophu kunye nokuzoba i-inki ukusuka kwinkulungwane ye-12 ukuya kweye-19, inembali efikelela kubukhosi baseRoma nakwimiSongo yoLwandle Olufileyo. UPliny uMdala (23-79 AD) uchaza ukusetyenziswa kwegalic acid njenge ...